Senior Accountant | Myanmar V-Pile Co.,Ltd. ﻿
26.3.2019, Full time , Manufacturing
Company: Myanmar V-Pile Co.,Ltd.
•	B.Com /LCCI Level III အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။
•	ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ၌လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။
Work location Building No. 107-109, Room No. 901.902, Corner of Anawrahta Road and Sint Oh Dan Street, Latha Township,,Yangon, Myanmar
Job Function: Senior Accountant
Myanmar V-Pile Co.,Ltd.
149 Days, Full time , Manufacturing
•	ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီ၌ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။
•	Pre-cast ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းကို ကောင်းစွာနားလည်တက်ကျွမ်းရမည်။ •	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ နွယ်ခွေရှိ Pre-cast စက်ရုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
Senior Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Myanmar V-Pile Co.,Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs Senior Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon